ရည်းစားဟောင်းနဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်နေဆဲကောင်လေးကို ချစ်သူအဖြစ်လက်ခံတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေသိထားသင့် – Trend.com.mm
ရည်းစားဟောင်းနဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်နေဆဲကောင်လေးကို ချစ်သူအဖြစ်လက်ခံတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေသိထားသင့်
Posted on January 11, 2019 by Noel
ရည်းစားဟောင်းနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ရှိနေဆဲ ကောင်လေးကို သင့်ဘက်က ချစ်သူအဖြစ်လက်ခံမယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေတော့သိထားသင့်ပါတယ်။သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းတွေမဖြစ်လာအောင်၊ချစ်သူစဖြစ်ကတည်းက စိတ်ပူလောင်မနေရအောင် အစကတည်းကစိတ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်တယ်မဟုတ်လား?ကဲ ဒါဖြင့် ဘာတွေသိထားသင့်လဲ?
ချစ်သူအဖြစ်လက်ခံတော့မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးပြီဆိုရင် အဲ့ဒီမိန်းကလေးက သင့်အတွက်စိုးရိမ်စရာ တစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ချစ်သူအဖြစ်လက်ခံပြီးမှအဲ့ဒီကောင်လေးက ရည်းစားဟောင်းဆီပြန်သွားတာမျိုးဖြစ်မှာ စိုးရိမ်နေမှာလည်းမလွဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့ သူမကို သင့်ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ် စိတ်ထဲမှာလက်ခံထားလိုက်ပါ။ဖြစ်တောင်ဖြစ်မလာသေးတဲ့ကိစ္စကိုကြိုတင်စဉ်းစားမနေပါနဲ့။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ သင်ပဲ စိတ်ပူလောင်ရမှာပါ။
*ချစ်သူပြောတဲ့စကားကို အလေးအနက်ထား နားထောင်ပါ
ဘေးလူပြောတဲ့စကားတွေ၊ကိုယ်တိုင်လျှောက်တွေးနေတဲ့သံသယအတွေးတွေထက် ကိုယ့်ချစ်သူက သူ့ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြ ပြောပြတာမျိုးရှိရင် နားထောင်ပါ။ဒီအချိန်မှာ ရည်းစားဟောင်းက အတိတ်ဖြစ်သွားပါပြီ။သူချစ်တာ သင်တစ်ယောက်ပဲရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် မဟုတ်တဲ့အတွေးတွေ၊စကားတွေနဲ့ ပြဿနာလုပ်နေတာထက် ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးပြောတာကို အလေးအနက်ထား နားထောင်ပေးလိုက်ပါ။စစချင်းကတည်းက ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေရင် ရေရှည်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြတ်စဲသွားကြတဲ့အချစ်ရေးတွေအများကြီးပါ။သင်က သင့်ရဲ့အချစ်ရေးကိုလွယ်လွယ်နဲ့အပြတ်မခံနိုင်ဘူး။သူနဲ့ပဲ ဘ၀ကိုရှေ့ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ချစ်သူလက်တွဲဖော်အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိပါ။ရှင်းပြခွင့်ပေးပါ။ကိုယ့်ချစ်သူက အနေအထိုင်မှန်ကန်နေသရွေ့
သံသယနဲ့စွပ်စွဲတာမျိုး၊တစ်ခုခုဆို ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင်းမြောင်းပြောတာမျိုးက သူ့အတွက်လည်းမကောင်းသလို သင်တို့အချစ်ရေးမှာလည်း အနာအဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အစကတည်းယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ဒီအချစ်ရေးကို မစတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီကောင်လေးကိုချစ်သူအဖြစ်လက်မခံခင် ရည်းစားဟောင်းနဲ့တကယ်ပဲကင်းရှင်းရဲ့လား၊သူငယ်ချင်းဆိုတာ တကယ်ပဲဟုတ်လား ကြိုတင်လေ့လာကြည့်ပါ။လက်ခံပြီးရင်တော့ အပေါ်ကအချက်တွေအတိုင်းပြုမူနေထိုင်ပါ 💗
ရညျးစားဟောငျးနဲ့လုံးဝအဆကျအသှယျပွတျတာမြိုးမဟုတျပဲ သူငယျခငျြးအဖွဈရှိနဆေဲ ကောငျလေးကို သငျ့ဘကျက ခဈြသူအဖွဈလကျခံမယျဆိုရငျ ဒီအခကျြလေးတှတေော့သိထားသငျ့ပါတယျ။သုံးပှငျ့ဆိုငျဇာတျလမျးတှမေဖွဈလာအောငျ၊ခဈြသူစဖွဈကတညျးက စိတျပူလောငျမနရေအောငျ အစကတညျးကစိတျကိုကွိုတငျပွငျဆငျသငျ့တယျမဟုတျလား?ကဲ ဒါဖွငျ့ ဘာတှသေိထားသငျ့လဲ?
ခဈြသူအဖွဈလကျခံတော့မယျလို့စဉျးစားထားပွီးပွီဆိုရငျ အဲ့ဒီမိနျးကလေးက သငျ့အတှကျစိုးရိမျစရာ တဈခု ဖွဈကောငျးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ခဈြသူအဖွဈလကျခံပွီးမှအဲ့ဒီကောငျလေးက ရညျးစားဟောငျးဆီပွနျသှားတာမြိုးဖွဈမှာ စိုးရိမျနမှောလညျးမလှဲပါဘူး။ဒါပမေဲ့ သူမကို သငျ့ခဈြသူကောငျလေးရဲ့ သူငယျခငျြးအဖွဈ စိတျထဲမှာလကျခံထားလိုကျပါ။ဖွဈတောငျဖွဈမလာသေးတဲ့ကိစ်စကိုကွိုတငျစဉျးစားမနပေါနဲ့။အဲ့လိုမဟုတျရငျတော့ သငျပဲ စိတျပူလောငျရမှာပါ။
*ခဈြသူပွောတဲ့စကားကို အလေးအနကျထား နားထောငျပါ
ဘေးလူပွောတဲ့စကားတှေ၊ကိုယျတိုငျလြှောကျတှေးနတေဲ့သံသယအတှေးတှထေကျ ကိုယျ့ခဈြသူက သူ့ရညျးစားဟောငျးနဲ့ပတျသကျပွီးရှငျးပွ ပွောပွတာမြိုးရှိရငျ နားထောငျပါ။ဒီအခြိနျမှာ ရညျးစားဟောငျးက အတိတျဖွဈသှားပါပွီ။သူခဈြတာ သငျတဈယောကျပဲရှိနပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ မဟုတျတဲ့အတှေးတှေ၊စကားတှနေဲ့ ပွဿနာလုပျနတောထကျ ကိုယျ့ခဈြသူကောငျလေးပွောတာကို အလေးအနကျထား နားထောငျပေးလိုကျပါ။စစခငျြးကတညျးက ဒီလိုပွဿနာတှဖွေဈနရေငျ ရရှေညျအဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူး။
ရညျးစားဟောငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ပွတျစဲသှားကွတဲ့အခဈြရေးတှအေမြားကွီးပါ။သငျက သငျ့ရဲ့အခဈြရေးကိုလှယျလှယျနဲ့အပွတျမခံနိုငျဘူး။သူနဲ့ပဲ ဘဝကိုရှဆေ့ကျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ခဈြသူလကျတှဲဖျောအပျေါယုံကွညျမှုရှိပါ။ရှငျးပွခှငျ့ပေးပါ။ကိုယျ့ခဈြသူက အနအေထိုငျမှနျကနျနသေရှေ့
သံသယနဲ့စှပျစှဲတာမြိုး၊တဈခုခုဆို ရညျးစားဟောငျးနဲ့ပတျသကျပွီးစောငျးမွောငျးပွောတာမြိုးက သူ့အတှကျလညျးမကောငျးသလို သငျတို့အခဈြရေးမှာလညျး အနာအဆာဖွဈနိုငျပါတယျ။အစကတညျးယုံကွညျမှုမရှိဘူးဆိုရငျ ဒီအခဈြရေးကို မစတာအကောငျးဆုံးပါပဲ။
အကွံပေးရမယျဆိုရငျတော့ အဲ့ဒီကောငျလေးကိုခဈြသူအဖွဈလကျမခံခငျ ရညျးစားဟောငျးနဲ့တကယျပဲကငျးရှငျးရဲ့လား၊သူငယျခငျြးဆိုတာ တကယျပဲဟုတျလား ကွိုတငျလလေ့ာကွညျ့ပါ။လကျခံပွီးရငျတော့ အပျေါကအခကျြတှအေတိုငျးပွုမူနထေိုငျပါ 💗
သွားပိုးစားခြင်းကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ